सुदूरपश्चिममा एमालेका दुई इन्चार्जः अलमलमा रहेका कार्यकर्ता भन्छन्-कसलाई मान्ने ? | नेपालन्युज
सुदूरपश्चिममा एमालेका दुई इन्चार्जः अलमलमा रहेका कार्यकर्ता भन्छन्-कसलाई मान्ने ?
एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने अन्य पार्टीबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई एमालेले सम्मान गर्ने बताए । मंगलबार कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेलाई ठूलो र बलियो बनाउन अन्य पार्टीबाट आएका साथीलाई सम्मान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यसअघि अन्य पार्टीबाट एमालेमा आउँदा उनीहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी यथावत राख्दै हामीले उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ,’ रावलले भने, त्यसो गर्दा एमाले बलियो हुन्छ ।’ न्युज कारखाना